I-Disney-Fox Merger yokuVala ngo-Matshi 20: Ibali elipheleleyo kunye neenkcukacha - Itv
Eyona Itv I-Disney iya kuba neFox ngokusemthethweni kwiVeki ezayo-Nantsi into onokuyilindela kwi-Merger ye- $ 71.3B
Indlu yeMouse ekugqibeleni iya kuthatha ulawulo lweFox ngoMatshi 20.Ifoto nguDrew Angerer / Getty Izithombe
Nangona iNkampani yeWalt Disney ivinjelwe ngokusemthethweni ukuxoxa ngezicwangciso zayo ze-21st Century Fox de emva kokuba isivumelwano sivale ngokusesikweni, umphathi weDisney uBob Iger kunye neqela lakhe labaphathi baxoxe ngokufutshane ngekamva lendibano kwiminxeba yabo kwinyanga ephelileyo. Ngoku, sinokulindela ingxelo eneenkcukacha ngakumbi.
I-Disney imisele umhla wokuvala we-20 yokufunyanwa kwayo kwe-Fox, Umhla wokugqibela iingxelo. Isivumelwano sezigidigidi ezingama-71,3- esiphantse sayiphinda kabini i-GDP yeRhode Island- ifumene ukuvunywa kokugqibela komthetho, kwaye abanini zabelo beFox ngoku baya kuba noLwesine wokuthatha isigqibo semali kunye nemfuyo ekufuneka beyifumene. Ekuqaleni, ezi nkampani zimbini zazivumelene kwisivumelwano esixabisa i-52,4 yezigidigidi zeedola, kodwa ukuphinda kulandelwe ukulandela ii-asethi zeFox nguComcast kwanyusa ixabiso. Ekugqibeleni, abanini zabelo beFox baya kwenza ipeni entle ngelixa iDisney yongeza ibhloko yokwakha kuluhlu lwayo esele lubandakanya uMarvel, uLucasfilm noPstrong.
Ukusuka kwimbono yeshishini, uninzi lwabasebenzi ngelishwa luza kuphulukana nemisebenzi yabo njengezikhundla zeDisney ngokwazo ukuba zithathe iNetflix kwaye zilungelelanise iinzame zayo ngqo-kubathengi-iDisney + kunye nesibonda esilawulayo eHulu- ngomxholo onomtsalane. Sukuyenza impazamo malunga noku: Le ntshukumo yayiqhutywa ikakhulu yimicimbi yokusasaza. Kodwa isivumelwano siza kuthetha ukuba kuya kubakho ubukhulu obukhulu kwizikrini ezinkulu nezincinci.
KaJames Cameron ’s I-Avatar ilungelo lokushishina Ngokuqinisekileyo sisacholo sesithsaba, esibonelela iDisney ngothotho lwefilimu eblokbluster enokuthamba emva kokuba iMarvel Cinematic Universe ingene kwisigaba sayo esingaziwayo IV kunye Idabi leenkwenkwezi I-sequel trilogy ifikelela esiphelweni. Eyokuqala I-Avatar Ifilimu yenze irekhodi lokuseta i-2.78 yezigidigidi zeedola kwihlabathi liphela, kwaye iindlela zayo ezine ezizayo ziye zaxabisa i-1 yezigidi zeedola. Ukuthetha nge-MCU, intloko ye-Marvel Studios uKevin Feige ngoku uya kufumana ulawulo lwe-X-Men kunye nabalinganiswa abane abaDala, enika uthotho lwe-superhero uthotho lwezinto zokudlala ezintsha ezimenyezelayo oza kudlala nazo.
Ngokuphathelele kumabonwakude, iDisney iyaphuma kwesi sivumelwano ngokubulawa kwamaqonga amatsha, kubandakanya iiNethiwekhi zeFX. Kudala ithathelwa ingqalelo i-HBO yekhebula elisisiseko, iiFX Networks zijamelene ne-2019 enzima uninzi lweyona miboniso ibalulekileyo kwi-hiatus. Kodwa enkosi kutyalo-mali olomeleleyo oluvela kwiDisney, u-CEO uJohn Landgraf unesicwangciso endaweni yokugcina uluhlu oluphezulu lweFX ngelixa usonyusa uphuhliso lwantlandlolo.
Uninzi lweziphumo ezibi zedili azizukuziva ngamanye amaxesha-ke ungalindeli ukuba naziphi na izinto eziguqukayo zivele kwi-MCU kude kube ubuncinci ngo-2021. Kodwa olu tshintsho lukhulu kumzi mveliso lusondela ngokukhawuleza. Bophelela phezulu.
'Uloyiko: uBette noJoan' iNkulumbuso yePremier Recap: Kwenzeka ntoni kuBaby Jane?
Ngaba umyalezo wakho we-Emoji ulahlekile kuTshintsho phakathi kweApple kunye ne-Android?
‘Umceli mngeni: Iimbangi III’ Isiqendu se-12: Ukuxhaphaza abo baxhaphazayo
Iposi ekugqibeleni ihambisa ileta enama-70 eminyaka ubudala kwidilesi yelali yaseGreenwich
Ihlala phi ian somerhalder
ndingaqonda njani ukuba ngubani onditsalele umnxeba ngaphandle kokuhlawula
ukugcina inethiwekhi kardashians
Ndiyathemba ukuba oku kuyakufikelela kakuhle
Kutheni ndibonakala ngcono esipilini
Indawo efanelekileyo yoku-odola ijusi yevape